နန်းစုရတီစိုး | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (မ) / နန်းစုရတီစိုး
Category Archives: နန်းစုရတီစိုး
နန်းဆုရတီစိုး – ရှေ့ဆက်သွားမှာပဲ (Forward) (2013) [Album]
၀၁။ ချိတ်အချိူးနဲ့ ၀၂။ မင်းကြောင့် (feat. ဆိုတေး) ၀၃။ Duck Face ၀၄။ ဘယ်အချိန်မှာနင်??? ၀၅။ သူငယ်ချင်း (feat. မိုးယံဇွန်) ၀၆။ ဒိုးဒိုးဒိတ်ဒိတ် ၀၇။ ရှေ့ဆက်သွားမှာပဲ ၀၈။ မေမေချမ်းမြေ့ပါစေ (feat. ရှိုင်းဝေယံ) ၀၉။ ကိုလူဆိုး ၁၀။ မင်းတစ်ယောက်တည်း ၁၁။ အားရပါရကဲ ၁၂။ နောက်ထပ်ပြောဦးလေ ၁၃။ Superman (Bonus Track) [feat. ကျော်ထွဋ်ဆွေ] [Download Whole Album – 49.41MB] Credit – ITBURMA
September 20, 2013 MMA အဆိုတော် (မ) နန်းစုရတီစိုး New Myanmar Albums Leaveacomment
စုမိ – ချစ်လို့ မ၀
၀၁ လွမ်းဘူတာ – စုမိ ၀၂ အချစ်ဦး – စုမိ+လိမ္မော်သီး ၀၃ ချစ်လို့ မ၀ – စုမိ ၀၄ ဆက်စောင့်နေမယ် – စုမိ+ဖြူ ၀၅ ဆရာမကြီး – စုမိ ၀၆ သင်ခန်းစာ (၁) – စုမိ+အိမ့်ချစ် ၀၇ တိတ်တခိုးအချစ် – စုမိ ၀၈ သင်ခန်းစာ (၂) – စုမိ+နီနီခင်ဇော် ၀၉ ဒီရင်ခွင် – စုမိ ၁၀ ကိုပေသီး – စုမိ+နန်းစုရတီစိုး ၁၁ နင်ပြောတဲ့အချစ် – စုမိ
May 12, 2010 mmsong အိမ့်ချစ် အခွေ (တကိုယ်တော်) စုမိ နန်းစုရတီစိုး New Myanmar Albums 8 Comments
ကြယ်ကိုးပွင့်အရောအနှောဒေါ့ကွန်း ၁။ ရာဇ၀င်အလွမ်း – သြရသ ၂။ ဆွမ်းအုပ်နီနီ – သြရသ + နန်းဆုရတီစိုး ၃။ အပယ်ခံ – ချစ်စနိုးဦး ၄။ မင်းကြောင့်ငါလေ – မိုးဟေကို ၅။ Sorry….နော် – နန်းဆုရတီစိုး ၆။ ရေလဲလိုသုံး – သက်ထားစံ ၇။ ဆုံစည်းခွင့် – သြရသ + အောင်အောင် ၈။ သံယောဇဉ် – ဆူဆန် ၉။ မိုးအဆုံး မြေအဆုံး – မေပုလဲသွယ် ၁၀ စက္ကန့်တိုင်း – သျှားထက်ဆင့်
May 26, 2008 mmsong အခွေ (အများ) နန်းစုရတီစိုး မိုးဟေကို New Myanmar Albums4Comments
နန်းစုရတီစိုး – မိုးမမြင် လေမမြင်
၁။ ကောလဟာသ ၂။ ရင်တွေခုန်နေလို့ ၃။ မာယာပြိုင်ပွဲ ၄။ မြောင်းထဲပစ်လိုက် ၅။ လာမချစ်နဲ့ ၆။ ကာရံမဲ့မျက်ရည် ၇။ မော်ရင်ရေသောက် ၈။ ၃၁:၁၄ ၉။ မေမေဆူလိမ့်မယ် ၁၀။ ကမ္တာခြားဖေဖေ ၁၁။ မိုးမမြင် လေမမြင် ၁၂။ ငုတ်တုတ်မေ့သွားမယ်
March 21, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) နန်းစုရတီစိုး New Myanmar Albums6Comments